SIYAASADA IYO DADKEENA/ Qalinkii:- Abdirashid Adem Pakistani | IctiraafNews.com
SIYAASADA IYO DADKEENA/ Qalinkii:- Abdirashid Adem Pakistani
Burco. Asc dadkay aanu wadaagno diinta, dalka, dhaqanka iyo afkaba. Subaxdaad aragtaba waxbaa kaa yaabiya inkastoo waayaha iyo wakhtiguba wada socdaan oo ay is weheshadaan. Qalinka waxaan u qaatay inaan wax ka idhaahdo 1. Dad wada siyaasi ah Waa qodobka 1aad in aynu wada siyaasi nahay shaki kama taagna, hadii aynu nahay
madax dhaqameed, caruur, ciroole, rag, haween, aqoon yahay, juhaalo, ganacsato, arday, macalin, shiikh iyo shariifba. Ku darsoo kuwa inoo matala siyaasada dawladnimo, xisbi nimo, iyo sharci dejinba kumay iman aqoon ay u Lee yihiin siyaasad iyo waxay dadka u matalaanba. Taasina waa waxa loo kala garan layahay siyaasiga iyo dadka wakhtiga la saaxibka ah. Siyaasadeenu malaha sumad iyo sawrac lagu garto. Hadaba maxaa siyaasiga inaga wada dhiga? Siyaasi waxa inaga dhiga oo ugu horeeya:-
1. TVYADA ama saxaafada. 2. Qofka oo loo magacaabo Xil wasiir ama xisbiyo. 3. Qofka oo caaya dawlada, xisbiyada ama qof Xil haya.. 4. Qofka oo passbord dabadeed sita khaasatan Europe, USA iyo Canada.
5. Qofka oo ka qayb qaatay dagaalo. 6. Qabyaalada xadhkaha goosatay. Siyaasiga aynu u baahanahay Dhab ahaan waxaynu u baahanahay dad inaga saari kara dhibta iyo samaan xumaantan siyaasada ee inagu habsatay ee meelkasta taala ee xitaa guryihii inoogu soo gashay, fekriyan waxaan o dhan lahaa
1. Qof diin ahaan, shakhsi ahaan, dhaqan ahaan iyo damiir ahaanba dhisan.
2. Qof aqoon, khibradba u leh siyaasada.
3. Qof garanaya in lagala xisaab tamayo masuuliadaas uu hayo, aakhiradiisana u tudhanaaya. Guntii iyo gaba gabadii
waa in lakala jiheeyo dadka oo qaybba wax lagu ogaado, siyaasada noocan ah ee aynu ku suganahay maaha mid horumar lagu gaadhi karo ee waa dib u dhac, hoog iyo halaag. Qalinkii:- Abdirashid Adem Pakistani